Fifidianana loholona : nametraka fitoriana eny amin’ny HCC ny Monima | NewsMada
Fifidianana loholona : nametraka fitoriana eny amin’ny HCC ny Monima
Manao ranolava. Tafapetraka, omaly eny amin’ny HCC Ambohidahy ny fitoriana sy fitarainan’ny antoko Monima momba ny hosoka sy fihoaram-pefy tamin’ny fifidianana loholona teo. Nitondra izany ny mpisolovava, Rasoavololona Voahangy. «Novorin’ny minisitra sy ny lehiben’ny faritra ary ny sefo distrika tao amin’ny biraom-panjakana iray ireo mpifidy vaventy rehetra, nialoha ny fampielezan-kevitra ka nampisafidianana hifidy ny HVM na hosoloina PDS ireo ben’ny Tanàna. Tsy hahazo famatsiam-bola sy ny tetikasa fampandrosoana koa ireo tsy mifidy izany. Hiantohana ny saran-dalana ary homena ny ampahany aorian’ny latsa-bato », hoy ny tatitry ny mpisolovava.
Nialoha izany, nomen’ny talem-paritry ny fahasalamana any Atsimo Andrefana tambiny 100 000 Ar ireo mpifidy vaventy, araka ny nambarany. « Homena 2 hetsy Ar ianareo hatao saran-dalana aorian’ny fifidianana. Efa aty an-tanako ny fanendrena PDS ka anareo ny safidy», hoy ihany ny tatitra.
Eo koa ny nampiasana marika samihafa amin’ny biletà tokana. « Tsy voahaja ny tsiambaratelon’ny fifidianana », hoy izy. Ho azy ireo, tsy ara-dalàna avokoa izany rehetra izany. Efa nitondra ny heviny koa ireo kandidà hafa any amin’ny faritanin’i Toliara tamin’ity herinandro ity. Tsy mifanalavitra amin’ireo avokoa ny nambaran’izy ireo.